GHRP-2 (Growth Hormone Releasing Peptide 2) dia secretagogue hormonina fitomboan'ny kilasy hexapeptide.Mizara fitoviana maro amin'ny GHRP-6, GHRP-2 no voalohany amin'ity kilasy hormonina ity, ary amin'ny faribolana maro, dia heverina ho safidy tsara kokoa eo amin'ny GHRP-6.Izy io dia...
AndarineS4 ​​dia fanta-daza amin'ny fanampiana amin'ny fitomboan'ny tanjaka ary mamela ny olona hanainga lanja mavesatra kokoa.
Andarine, fantatra amin'ny anarana hoe S4, dia Selective Androgen Receptor Modulator (SARM) novolavolain'ny GTx.Tahaka ny SARM's S4 rehetra dia novolavolaina tamin'ny fitsaboana ny aretina fandaniam-panafody miaraka amin'ny fitsaboana hypertrophy prostatika tsara tarehy izay ambony ihany koa amin'ny lisitry ny fitsaboana azo atao ...
Ity steroid Winstrol (stanozolol) ity dia manana fahafahana mampitombo ny hery ary afaka mandika amin'ny hery sy ny hafainganam-pandeha izany.
Winstrol dia iray amin'ireo steroid anabolika malaza sy malaza indrindra eto an-tany.Novolavolain'ny Winthrop Laboratories tamin'ny faramparan'ny taona 1950, ity dia steroid anabolika izay nahasarika ny sain'ny media nandritra ny taona maro.Raha ny marina, ireo izay mbola tsy nampiasa steroid anabolika ...
Primobolan (Methenolone Acetate) dia tsy nisy fiantraikany mazava tamin'ny fampiofanana ara-batana?
Primobolan dia steroid anabolika am-bava izay miavaka kely raha oharina amin'ny steroid anabolika am-bava.Alohan'ny handehanantsika bebe kokoa, zava-dehibe ny manavaka ny maha samy hafa ny Primobolan sy ny Primobolan Depot.Primobolan Depot dia dikan-tsindrona amin'ny hormone...
Masteron (Drostanolone propionate) dia tokony hampiasaina amin'ny antonony ho an'ireo izay manana mari-pahaizana ambony.
Drostanolone Propionate dia steroid androgenic anabolika izay namely voalohany ny tsena manodidina ny 1970 eo ambanin'ny anarana Masteron novokarin'ny Syntex.Na izany aza, ny fitambarana dia novolavolain'ny Syntex tamin'ny 1959 miaraka amin'ny Oxymetholone (Anadrol) saingy tsy havoaka ...
Ny fiantraikan'ny hormonina fitomboan'ny olombelona (Somatropin) amin'ny fahasalamana dia miovaova amin'ny olona tsirairay.
Ny hormonina fitomboan'ny olombelona (HGH) dia tsy iray amin'ireo hormones mahasoa indrindra vokarin'ny vatantsika, fa iray amin'ireo tadiavina indrindra amin'ny endrika exogenous.Amin'ny endrika exogenous, ny HGH dia mitovy amin'ny hormone voajanahary voajanahary, ary tsy maneho ny iray amin'ireo mahasoa indrindra ...
Miaraka amin'ny Equipoise (Boldenone Undecylenate) dia afaka mampitombo haingana ny hozatrao ianao.
Boldenone Undecylenate dia testosterone avy amin'ny anabolic androgenic steroid izay fantatra indrindra amin'ny anarana ara-barotra Equipoise nomen'i Squibb tamin'ny taona 1970.Raha ny Equipoise dia sokajiana amin'ny fomba ofisialy ho steroid anabolic grade veterinarian, ny andiany voalohany amin'ny Bolden ...
Afaka mahazo tombony tsy ampoizina sy fatiantoka matavy ve ny Dianabol (Methandrostenolone)?
Dianabol dia maneho ny iray amin'ireo malaza indrindra ary iray amin'ireo steroids anabolic manan-danja indrindra amin'ny fotoana rehetra.Tsy misy isalasalana fa ity no steroid am-bava malaza indrindra hatramin'izay ary iray amin'ireo steroids malaza indrindra amin'ny endriny rehetra.Na dia saika hita ho toy ny vava...
Diniho ny Deca Durabolin (Nandrolone Decanoate) ho an'ny fanofanana amin'ny bisikileta sy ny fampiasana alohan'ny hazakazaka.
Deca Durabolin dia steroid anabolika malaza indrindra ahitana ny hormone steroid Nandrolone ary mifatotra amin'ny ester Decanoate lehibe.Ny hormonina Nandrolone dia niseho voalohany tamin'ny 1960 ary novolavolaina ho an'ny fampiasana ara-barotra tamin'ny 1962 nataon'i Organon amin'ny anarana hoe Deca ...
Clomid (Clomiphene Citrate) no mpanjakan'ny vokatra manohitra ny vehivavy.
Clomid (Clomiphene Citrate) dia anti-estrogen mahomby mahery vaika voasokajy amin'ny fomba ofisialy ho Selective Estrogen Receptor Modulator (SERM).Amin'ny lafiny maro dia mitovy amin'ny SERM malaza hafa ao amin'ny Nolvadex (Tamoxifen Citrate) izy io.Nahazo saina eran-tany voalohany i Clomid ...
Ohatrinona ny Clenbuterol no ilainao fehezina mba hahomby kokoa?
Clenbutero Hydrochloride dia bronchodilator mahery izay ampiasaina amin'ny fitsaboana aretim-pisefoana toy ny asma.Na dia nahomby aza izany tamin'ny drafitra fitsaboana toy izany dia tsy nankatoavin'ny US FDA mihitsy.Na izany aza, ankatoavina sy ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny firenena hafa...
Anavar (Oxandrolone) dia manana ny voka-dratsiny kely indrindra amin'ny fahasalaman'ny vehivavy.
Anavar no anarana marika malaza mifandray amin'ny dihydrotestosterone azo avy amin'ny anabolic steroid Oxandrolone.Ny hormone Oxandrolone dia navoaka voalohany tamin'ny fiandohan'ny taona 1960 teo ambanin'ny anarana Anavar nataon'i GD Searle & co.ary nalaza ho mitondra fitsaboana maro...